Khilaaf aad u xooggan oo u dhaxeeya Mas'uuliyiinta Maamulka Gobolka Hiiraan oo cirka isku sii shareeray.
Khilaaf aad u weyn oo u dhaxeeyay Mas'uuliyiinta Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa cirka isku sii shareeray, iyadoo Mas'uuliyiinta Maamulkaas ay hadalo kulul isu marsiiyeen warbaahinta, kaasoo midba midka kale uu ku eedeeyay inuu caqabad ku yahay arrimaha horumarka iyo ammaanka. War si wada jir ah shalay uga soo baxay Gudoomiye ku xigeenka dhanka Amniga ee Gobolka Hiiraan Axmed Cabdalla Cismaan (Axmed Inji) iyo Gudoomiyaha degmada Beledweyn Sheekh Cismaan Barre ayay labadaba ku eedeeyeen Gudoomiyaha Gobolka C/fataax Xasan Afrax inuu ka dambeeyo amni darada ka jirta magaalada.
Sheekh Cismaan Barre Gudoomiyaha degmada Beledweyn ayaa sheegay in Gudoomiyaha Gobolka uu soo fara gishtay howshii maamulka degmada, isla markaana caqabad ku noqday habsami u socodka maamulkiisa degmada.
"Aniga ayaa Gudoomiye degmada ah, wuxuu caqabad ku yahay, sidii aan waajibkeyga u gudan lahaa, amni darada qeyb ayuu ka yahay"ayuu yiri Gudoomiyaha degmada oo sheegay in Ciidamo gaar ah uu leeyahay gudoomiyaha, kuwaasoo xusay in sidee doonaan ka yeelan karaan.
Gudoomiye kuxigeenka Gobolka ee dhinaca ammaanka Axmed Inji ayaa dhankiisa sheegay inay warqad u qoreen Wasaarada Arrimaha Gudaha, ayna ka dalbadeen in tallaabo deg deg ah laga qaado, waxaana uu xusay inuu hortaagan yahay howsha deegaanada Gobolka looga xoreynayo Al-Shabaab.
"Ninkaas wuxuu bilaabay in qaab hogaamiye kooxeednimo u dhaqmo, hada Xamar ayuu ku sugan yahay, waxaa ka codsaneynaa dowladda uu madaxda ka yahay Madaxweyne Shariif inay tallaabo ka qaado, anagana warqad ayaa u gudbinay Wasaarada Arrimaha Gudaha"ayuu yiri Axmed Inji.
Khilaafkan ayaa ku soo aadaya, iyadoo horay Maamulka Gobolka Hiiraan uu isku heystay arrimo ay ka mid tahay canshuuro, oo xubno ka tirsan Maamulkaas ay sheegeen in shacabka aan wax canshuuro ah laga qaadi karin, iyadoo bandowga xilliyada qaar la joojin, dadkana si joogto ah u ganacsadaan.